Mmetụta ya na ndị nche dị na iji kamera-Worn Came | Ngwọta OMG
Ndị uwe ojii kwenyere na igwefoto ahụ nwere ike ime ka ndị uwe ojii nwekwuo ike ịchọ na kwalite nghọta na ngosipụta nke ọrụ ndị uwe ojii. Fọdụ ndị uwe ojii nwere igwefoto nwere uwe iji nwalee arụmọrụ ha. Ndị otu ndị uwe ojii kwupụtara afọ ojuju ha na nsonaazụ nyocha ahụ n'ihi na ihe osise nke igwefoto ahụ mere bụ ihe ziri ezi karịa ngosipụta nke ọnụ.
Peoplefọdụ ndị mmadụ na-eche na igwefoto ahụ na-eyi nwere ike ime ka ndị uwe ojii nwee ike ịchọpụta ebumnuche ọzọ, ịza ajụjụ na ụzọ doro anya, si otú a rụọ ọrụ nke mmebe iwu. Agbanyeghị, ụfọdụ Ndị otu na-eche na ebe ọ bụ na ndị uwe ojii nwere ike ikpebi “ma ọ bụ na ha agaghị edekọ na mgbe ịmalite ndekọ,” edeghị ndị uwe ojii n'onwe ha, igwefoto ahụ nwere eyi agaghị enwe ike igosipụta ihe ahụ merenụ nke ọma. Ọzọkwa, igwefoto ahụ nwere eyi nwere ike ịnakọta ozi na data karịa ihe dị mkpa maka mmanye iwu, na-ebilite nchegbu banyere nsogbu nchebe nzuzo.
A ga-amata ndị uwe ojii na-ese igwefoto site na akara site na akara edere “Ndekọ vidiyo”. Agbanyeghị, igwefoto anaghị agba ọsọ na-adịgide adịgide. Naanị n'ihe banyere esemokwu ndị na-abịanụ, ndị isi na-agbanye igwefoto.
(a) ordingdekọ ihe omume mere ịdabere na ya: Ihe onyonyo vidio ndị a nwere ike ime ka ndị uwe ojii na ndị mmadụ nwee ntụkwasị obi na ndị uwe ojii n'ihi ọnụọgụ igwe niile na-eyi ahụ ma ọ bụ ebe a na-ese vidio;
Na nzaghachi banyere nchegbu ndị a dị n'elu, enwere "ụkpụrụ nduzi doro anya na nke siri ike" nke na-achịkwa iji igwefoto vidiyo na-ebugharị:
(a) Vidio a dabere na ihe omume: Enwere ike iji kamera ahụ na-eyikwasị onwe ya na “ọnọdụ esemokwu” ma ọ bụ “ọ bụrụ na udo nke ọha mmadụ nke ebutela ma ọ bụ nwere ike mee”;
Mmetụta ndị na-eche nche na iji kamera-Worn Cameras gbanwere ikpeazụ: December 2nd, 2019 by admin
Nzuzo 2937 10 Echiche Taa
BWC090 - Light Weight Police Police Worn Camera maka…
BWC083 - Light Weight Police Police Worn Camera maka…
Lọ ọrụ nchekwa - Otu esi eme ya bụ Police Body Worn Cameras